Privacy fence - bestpvcfence.com
musha >Products >Privacy fence
Imwe michina yepachivande yakavhara iyo ichagadzirisa yadhi yako kuenda kune YE yakawedzerwa kunze kwegara.
Vanhu vazhinji vanoisa fence yega yega kuti vachengetedze pfuma yavo uye vagadzire zviratidzo zvisingadadi uye mheremhere kubva kune vavakidzani vepedyo kana motokari. Imwe feni yepachivande inogonawo kuva yakakwana kana iwe ukagara munguva yakawanda yepasi, pedyo nemugwagwa wakabatikana / mugwagwa mukuru kana pedyo nemabhizimisi uye magetsi. Kunyanya, kana iwe uine bhati yekugezera, unofadza sunbathing mujeri rako, kana uine kunze kwebhebhu, iwe unofadza kuvharwa kwekuti mahwindo ehupfumi anopa.
Kuisa ruzivo rwehupomberi kumativi evhare kana nzvimbo kunounza huzhinji hwemhuri yakanyarara yekunyarara nekutsauka. Nzvimbo dzekuchengetedza yakavanzika pamwe chete dzinopa humwe hufumi hwakafanana nekuchengetedzwa kwepfuma, kuwedzera pfuma inofanirwa, nekuchengeteka kwevechidiki uye mhuka dzemhuka.
Zviratidzo Zvishanu Zvauri Kuda NePVC Fence.
5 Zvinhu Zvakakosha Zvaunofanira Kuziva Nezvinyorwa Zvokuvanda Fence.
Zvandinoda Munhu Wose Anoziva NezveDhenesa Kuchenesa.
Chikonzero Nei Uchifanira Kuziva Fence Zvigadziro Pazvakanaka Kamwe Rimwe Muupenyu Hwako.
Kubatsira Kwevinyl Fence Inogona Kuchinja Maonero Ako.
Chipando chepilitiki pfungire yega yega yekutengesa / kupi iwe unogona kushandisa fence yega yega?
Vinyl Fence / iyo ichavhara fivc inotora nguva yakareba sei? / Iyo inobatsira yevinyl picket cence
Nzvimbo dzepachivande dziripo inowanika kupararira kwezvigadzirwa kubva pakutanga kusvika kune dzimwe nyika. iyo nhepfenyuro uye zvigadzirwa zvega fence yega yega yega ishandzable, iyo inoreva kuti iwe uchakwanisa kuona fence yakakodzera yeimba yako.
Nzvimbo dzekuchengetedza yakawanda dzinowanzotorwa kubva mumatanda, kunyange zvakadaro tine chido chekuwedzera kupa vinyl uye chain chain link fences. zvose zvinogadzirisa zvinopa muchengeti wehupfumi nekuchengeteka. Kana uchida mamwe mashoko pamusoro pekupi kwehupfumi hwepachivande hwakanakisisa kune yako pfuma, uve wakasununguka kutaura neUnited States nokuda kwekufungidzira kusingabhadhari.
Zvose Long fungidziro yehupfumi inowanzoitwa kune zvaunofanirwa uye inouya ne aa 1 yakazara gore gore.
Kana waita sarudzo yepamusoro, pfungwa yako inotevera inofanira kuva yehuwandu hwehutano hwako uri kuedza kuwana. pane imwechete inoda zvinhu zvakasimba zvakasununguka zvachose kana chimwe chinhu chiduku chakawedzera chakajeka here?
Kune zvakawanda zvakadai zvemhando yekutsanangurira kubva pamwe pamwe ne opaque kubva kumusoro-soro kose kusvika kune pasi pasi kana slats izvo zvingaita kuti zvionekwe asi zvigobvumira kusvibiswa kudzoka zvakare.
Kana uri kuedza kuwana fence iyo inogona kupa kutarisa kwakanaka kwakarongeka, edza kuwedzera muchengeti wechipfuva pane zvakakwirira zvepambo. iyo inowedzera bhuru rakanaka kune yadhi yako asi uchiri kupa ruzivo rwauri kuda.
Chimwe chirongwa chakanaka chiri kuvaka mumvuri bhokisi chimiro chinowedzera kuzivikanwa se "muvakidzani akanaka" cheni, uri kushandisa mapiketti kune rumwe rutivi rwezvipfuramabwe.
Mumvuri wefodhi fence ine nzvimbo pakati pemaketetete kuti zvibvumira mweya uye chiedza chekureruka kusangana pamwe chete asi pane chimwe chikamu chinopesana, makateti anokwanisa kukwirirana pamwe nekusavhiringana kwepakadzika kunoverengwa.
Kune michina isingagumi kuonekwa pane kutsvaga kuti chii chichazoshanda zvakanakisisa kune yadhi yechipungamire yega yega, yako terrace privacy fence, kana yako curtilage privacy fence. Mimwe mitambo inobatanidza hutano hwekare, ruvara rwekuchengetedza, kana hutambo hwepadet.
Privacy Chivako Cost
Kana ukangosarudza izvo zvinhu zvaunoda kushandisa, kureba, uye kutarisa fence yako yega yega, inguva yekutenga-shanduka kune zvakakosha zvakakosha zvezvinhu zvako kana kana uchida kubhadhara mumwe munhu kuti agone kuisa iwe.
Chero chero zvisarudzo zvinoshandiswa zvakakunakira iwe, funga kusarudza pamusoro pezvinhu uye michina zvinogona kuitika kwenguva yakareba! Aya mazano achakupa majenya ekufunga pamusoro pekusarudza feni yega yega inotaridzika zvakanaka seyadhi yechiringi yega yega, nzvimbo yako yoga fence, kana dare rako rega fence!
Mumiririri wedu anogona kukupa iwe nesarudzo dzakasarudzwa kusarudza kubva pane zvekutaura kune zvakasiyana-siyana fence zvigadzirwa uye nzvimbo dzakakwirira. ivo vachatora pasi pekuongorora maguta emuguta nemataundi uye imba yemudzimai zvigadzirisano.
Nzvimbo dzedu dzepachivande dzinochengetedzwa kuti dzidzivise kukuvadzwa kwemvura uye zvikwata. Kugadzirisa kwakarurama kuchaita kuti huni yako ionekwe inonzwisisika uye inogara makore akasimba kana yaiswa mukati. iwe uchakwanisa kudzivirira fence yako nokuichengeta yakachena tsvina uchishandisa simba rawakashambidza dzimwe nguva.
Iyo vinyl neketani yehuni dzinosungirirwa dzinoda zvishoma zvishoma kusina kugadziriswa chero kupi zvako. zvichida kamwe kamwe pagore iwe unovaputira nevhaji kana kuapukuta pasi nesiponji.
Privacy Privacy Fence Panels
Yenguva refu-Yokupedzisira uye Yakaderera-Maintenance
Zvimwe zvehupanda fence zvinhu, semapuranga uye vinyl, zvinogona kuoneka zvichikoshesa zvishoma, zvisinei nekuda kwekuda kwechifukidzo chidiki-hupenyu, vanoda hutano hukuru uye zvishoma nezvishoma inofanira kuchinjwa. yakagadzirwa Concrete Fence Walls haisi kukundwa nemarwadzo emamiriro ekunze akaita shanduro dzakasiyana-siyana dzinoita, kuitira kuti dzinoda kuchengetwa kuduku, uye kuonekwa kwakanaka kwezvizvarwa zvakasiyana-siyana kudzoka.
Precast Concrete inopa Seclusion & Silence
Nzvimbo yehupenzi fence panels inopa danho rakakura rekuchengetedzwa uye kudzivirirwa pane zvinowanzoitwa fence systems. nepo fence rusvingo rukuru ringave inonyanya kukosha kwehupfumi hwomukati hwomukati, vanhu vakagadzira konkrini masvingo masvingo vanoziva zvakabatana zvakanaka.
Precast concrete fence inopa kwete kungozvimirira uye kuvhara, asi vanopa kuchengetedza kubva kune vashandi, motokari motokari uye kudonha ruzha kubva kune rumwe rutivi rworusvingo.
Apo vagari venyika vari kuedza kuwana ruzivo rwehupenzi dzidziso yeavo vanotenga, uye kuwana zvigadziro, maitiro uye mavara anowedzera nzvimbo yakazara.
Privacy Fence Panels Zvikamu
Nzvimbo Yakachengetedzwa Fence panels Zvikamu zvakatenderedzwa zvakasungirirwa, kuratidza kuti kune dombo rinotaridzika rakasikwa, brick kana kubvisa mavara kune rumwe rutivi rwemasvingo, zvichiita kuti kuverengwa kwakanaka kubva kumativi ose.
Kukurukura Zvinyorwa: Urefu, Kureba uye chidimbu
Nzvimbo Dzakachengetedzwa Mipata inowanzogadzirwa zvegetsi uye inowanikwa munzvimbo dzakakwirira kusvikira pamamita gumi nemaviri, nepamusoro-soro kunosvika pakukumbira.
Nhengo imwe neimwe Combo-Cast ™ Panel
Nhengo imwe neimwe Combo-Cast ™ Panel ine mamita gumi nemashanu pakureba, uye mapapanhau ave chikamu chekufamba nenzira yakadaro sei kuvimbiswa kusvinudza maziso kuodzwa kubva pakuona nzvimbo dzakapindirwa.
Fence Panels ndiwo mashoma e5 "akaoma. Uye sezvo konkrititi inogona kunge yakanyanyisa, inoita sekunoratidzira ruzha rworuzha runyararo rwenheyo, kuderedza kupindira kwezwi kuburikidza nemadziro, kuchengetedza ruvande kubva kune rumwe rutivi.
Zvokuchengetedza Zvimwe uye nekuwedzera Kudzivirirwa
Dzimwe nguva kuvanzika hakusi kukwana, uye humwe huwandu hwekuchengeteka hunodiwa.
Integrative Security Fence instrumentation dzimwe nzira
Privacy Fence panels zvinongobatanidza kuchengetedza fence instrumentation dzimwe sarudzo semakamera, fence lighting kana tambo yebheru, kupa humwe hupenyu hwekuvharwa.
Nzira Yokuvaka Nayo Chekuvhara Fence
Kana iwe uchida kutora chigaro uye ureve mujeri rako uye unonzwa humwe huri huno nehuchengeteka, iwe unoda kuti ungave wakareba fence. inotevera kutevera mazano aya uye iwe uchavaka fence yepachivande yakapoteredza yard yako.
Hezvino izvo zvaunenge uine chikamu chimwechete che 8-foot ye AN 8-foot foot fence:
1. 2 12-foot (3.7-mamita) 6-ne-6-inch posts (Iwe unongoda chete imwe yepositi pane imwe neimwe yechinyorwa.)
2. 3 8-foot (2.4-mamita) 2-ne-4-inch board
3. Zvigumi nemana 8-foot (2.4-mamita) 1-ne-8-inch board
5. Wood inodzivirira
6. Akagadzirwa Nails
7. Paint kana tsvina
Pane mitemo inosvika kupi uye nenzira yakakwirira yepamusoro ingave, iyo ichave yakagadzirwa, uye iyo nzira iyo inosangana nayo.
Sarudza chero kupi zvako kugadzira fence yako. Plot kunze kwose kwese mapurisa anogona kuenda. Zvinyorwa zvinofanira kuva mamita masere (2.4 mamita) zvakasiyana. iyo inofanira kunge yakatarwa zvakafanana pairi imwe ndege.
Gadzira AN masere kusvika ku10-inch (20 kusvika 25-centimita) kureba kwemahombe yega yega yega. Makomba anofanira kunge ari echetatu chetatu semvura yakadzama nokuti yakareba urefu hwepasiti. Nokuda kwedu 8-foot (2.4-mita) fence, tinoda gomba riri 3-foot (91.4-centimeters) yakadzika uye 12-foot (3.7 mamita) mushure.
Tora pasi pasi pezvikamu zvako nekuchengetedza kuitira kuti zvirege kuora. uise gorovhe pazasi kwemakomba, uye isa zvinyorwa. Zadza nzvimbo yakasara yakakomberedza zvigaro nezvimwe zvitsva.
Gadzirai zvinyorwa zvako ne 3 zvakafanana nepakati 2-by-4 rails. Itai imwe yezvitoro masendimita matanhatu kusvika kumasendimita gumi nemashanu kubva pasi, imwe nechepakati uye imwe yepamusoro. ivo vachachengeta feni yako yakarurama uye yakachengeteka.
Shandisa mapurisa e1-na-8 kuti uvanze fence yako. tanga pane imwe nzvimbo uye mapuranga emisungo rimwe riri pedo nepamusoro pezvose zvemasara.
Dhinda kana tsvina yako yakavharwa fence kuti uidzivirire kubva mumamiriro ekunze.
Jovyea inyanzvi yekugadzira Chinese (factory / wholesaler / suppliers) iyo inofunganya nekugadzira, kukura nekugadzirwa kwehupfumi hwehupfumi hwehupfumi.Our chain chain inozadza, yakanaka, yakanaka. Zvose zvemiti yedu inoteerera nehutano hwakanaka hwehutano hwemhando, zvigadzirwa zvedu zvave zviri vazhinji vevatengi pamwe chete vanobvumirana.